Just In: Wiilkii Qadaafi Saif al-Islam oo nolol lagu qabtey isagoo dhaawac ah – SBC
Just In: Wiilkii Qadaafi Saif al-Islam oo nolol lagu qabtey isagoo dhaawac ah
Wiilkii ugu saameynta badnaa awlaada Col. Qadaafigii maanta la diley Saif al-Islam Gaddafi ayaa goor dhaweyd lagu qabtey magaalada Sirta ee dalka Liibiya isagoo dhaawac ah.
Saif al-Islam ayaa dhaawac ka qaba lugta waxaana lagu qabtey Isbitaal lagu dabiibayey dhaawaciisa iyadoo qabashadiisu ay ku soo aadayso saacado uun ka dib markii la diley Aabihiis iyo walaalkiis Mo’tassim Gaddafi.
Col. Qadaafi iyo wiilashiisa ayaa ka dagaalamayey magaalada Sirta oo aheyd goobtii ugu dambeysay ee ay ku sugnaayeen xoogaga Qadaafi taabacsan, waxaana qabashadiisa ay noqonaysaa in ay meesha ka baxdey guud ahaan xukuumadii Qadaafi iyo intii difaacaysay.
Wasiirka cadaalada ee golaha qaranka KMG Liibiya Mohammad al-Alagiayaa goor dhaweyd u sheegay wakaalada wararka ee AP qabashada Saif al-Islam isagoo xusey in ay hada uu yahay maxbuus.
Saif al-Islam ayaa isaga iyo Aabihiisii geeriyoodey waxaa horey maxkamada dambiyada dagaalka ee caalamiga ah ay u soo saartey go’aan ay ku dalbanayso in la soo qabto iyadoo loo cuskanayo wax loogu yeeray dambiyo ka dhan ah aadamiga oo ay ka geysteen Liibiya.
Maxamed abdulahi maxamud says:
Inaa lilaahi waa inaa ilayhi raajicuun ilaahay jana farwawso ha warabiyo asaga iyo inti muslimin ahayd o manta ku geriyotay samir iyo imana alaha ka siyo eheladi iyo qarabadi u ka geriyoday madaxwayne qadaafi waxan ka xumahay dhimashada madaxwayne mucaamiral qadaafi iyo wiil kisa oo manta lagu dilay sirte oo ka tirsan dalka libia
Inaa lilaahi waa ina ilayhi raajicuun waxaan tacsi tiranyo leh halkan uga diraya eheladi iyo qarabadi u ka geriyodeen madaxwaynaha iyo wiilkisa oo manta ay ku dileen mucaradka libia o kaso horjeday madax waynaha manta geriyoday waxan lenahay alaha ka warabiyo jana fardawsa asaga inti muslimin ahayd o manta ku geriyotay